10 Sharci Oo Ay Tahay In Seey Kasta Uu Ilaaliyo Haddii uu Rabo Guur Farxad Leh - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»10 Sharci Oo Ay Tahay In Seey Kasta Uu Ilaaliyo Haddii uu Rabo Guur Farxad Leh
Haddii aad rabtid in guurkaaga uu guuleysto, waxaa jira qodobo loo baahanyahay inaad raacdo seey ahaan.
1. Haddii aad rabto in guurkaaga uu guleysta noqo seey wanaagsan oo xushmeeya xaaskiisa. Seeyga wanaagsan kama dhigaayo xaaskiisa mid aanan muhiim ahayn mana ula dhaqmaayo sidii qof liita oo kale.
2. Haddii aad rabto in guurkaaga guuleysto, xaaskaaga waa inaad siisaa mudnaanta koowaad ma aha walaalahaa ama qaraabada. Guurkaaga ma guuleysan karo haddii aadan xaaskaaga siinin mudnaanta koowaad.
3.Haddii aad rabto guur guuleysta, waa inaad si joogta ah ugu sheegtaa xaaskaaga inta aad jeceshahay iyada oo aad ugu muujineyso ficillo sidoo kale. waxaad dareen siisay jacayl iyo in la rabo markaad had iyo jeer usheegto inaad jeceshahay.
4. Haka joojin shukaansiga xaaskaaga guurka kadib. Rag badan ayaa guurka u arka yool la gaaray ama hadafkii oo la gaaray isla markaana xaasaskooda ka joojiya dareenkii ay siin jireen markii ay shukaansanayeen. Xaaskaaga waxay rabtaa in dareen aad siiso mar walba, usameey wax kasta oo macaan oo aad u sameyn jirtay xilligii aad shukaansaneysay.
5. Haddii aad rabto in guurkaaga guuleysto, waa inaad ilaalisaa ereyadaada, ballamo aanan laga soo bixin waxay burburin karaan guurkaaga. Markaad ilaaliso oo aad ka dhabeyso ballamahaaga seey ahaan, waxaad hanatay kalsoonida xaaskaaga.
6. Ma jirto haweeney rabta nin isha mid kasta la raaca. Haddii aad rabto guur guuleysta indhahaaga waa inay ku jeedaan xaaskaaga kaliya. Burburka guur badan ku yimid ayaa ah natiijo ka dhalatay imaan darrada ragga. Xaaskaaga waa inaad u aragtaa haweeneyda dunida ugu quruxda badan.
7. Waxaa lagaa raba a seey ahaan inaad dareen ahaan u qanciso baahida xaaskaaga, waxaa lagaa rabaa seey ahaan in xaaskaaga aad shumiso subax waliba kahor intaadan shaqada aadin iyo markaad guriga kusoo laabato. Waxaa sidoo kale lagaa rabaa inaad ka haqab tirtid baahida sariirta.
8. Deeqsi u noqo xaaskaaga markeey noqoto lacag. Haddii ay xaaskaaga shaqeyso ama aysan shaqeyn waxaa lagaa rabaa nin ahaan inaad bixiso. Jooji nacasnimada, ma jiraan wax ku jaban in lacagta aad sida adag ku shaqeysay aad ku qarash gareyso xaaskaaga, way mudantahay.
9. Haddii aad rabtid in guurkaaga uu guuleysto, waa in xaaskaaga aad ka caawisaa howsha guriga, ku caawi jikada, sariiraha u firaash oo cunnada u kari, inaad intaas u sameyso kaama dhigeyso nacas, ee waa Sharaf.
10. Rag badan ayaa kufashilma iney waxyaabaha qaar ku aragti ay noqdaan xaasaskooda taasina waa qalad. Haddii aad rabtid in guurkaaga guuleysto, waa inad dadaal ku bixisaa inaad waxyaabo kala dhex baxdo aragtida xaaskaaga, waa qalad inaad u dhaqanto sidii inaad waxa adhan ogtahay. Seeyga wanaagsan wuxuu isku dayaa inuu waxyaabo dheeraad ah ka helo aragtida xaaskiisa.